अमेरिकी चलचित्रमा स्वस्तिमाले कति लिदैछन् पारिश्रमिक? हेर्नुहोस् भिडियो – Butwal Sandesh
अमेरिकी चलचित्रमा स्वस्तिमाले कति लिदैछन् पारिश्रमिक? हेर्नुहोस् भिडियो
स्वस्तिमा र केकीसँगै अन्य केही नायिकाहरुले पनि अडिसन दिएका थिए । चलचित्रको निर्माण पक्षको विषयमा भने अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन । चलचित्रमा अन्य कलाकार भने अमेरिकन नै हुने बुझिएको छ । चलचित्रको सम्पूर्ण छायांकन पनि अमेरिकामा नै हुनेछ । को रोनाको त्रा स सकिएलगत्तै चलचित्रको छायांकन सुरु हुनेछ ।